३ दिनसम्म चलेको सम्मेलनले घोषणापत्र माथि व्यापक छलफल गरेको थियो । त्यसमा विज्ञ तथा सरोकारवाल व्यक्तिहरुले सुझाव दिएका थिए । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सुझावअनुसार घोषणा पत्रमा आबश्यक कुराहरु थप गर्दै लैजाने समितिका अध्यक्ष डा. संजिव सापकोटाले बताए ।
‘धेरै विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालाहरुले आफ्नोे अभिव्यक्ति दिएका छन् । सो टिप्पणीअनुसार बाँकी कुराहरुलाई समावेश गर्दै लगिने डा. सापकोटाले बताए ।
घोषणा पत्रले विश्वभरी छरिएर रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एकै ठाउँमा समेट्ने प्रयास गरेको डा. सापकोटाले उल्लेख गरे ।
दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले तयार गरेको घोषणा पत्रमा डाक्टर, नर्स, फिजिसियन लगायत विश्वभरी छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एकै ठाउँमा समेट्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका, आपसी समझदारी लगायत विषय समेत घोषणा पत्रले समेटेको छ ।
कार्यक्रमको समापनसत्रमा डा. दिनेश ज्ञवाली, डा चन्द चटउत ( सिकागो), डा भूपेश खड्का, डा.कुश श्रेष्ठ (अस्ट्रेलिया), डा. बोधाराज सुवेदी पोल्याण्ड, डा. सुरज थापा (नर्वे), डा निकिता पाठक, डा. लक्ष्मण पोख्रेल, डा.रमेश खोजु, डा. सरिता भट्टराई, डा. इशान अधिकारी, डा. सुनिल शाह, डा.भुपेन्द्र खड्का, डा. नवराज केसी, डा. निस्हिता पाठक, डा. ड्रोना रसाइली(क्यानडा), डा. सरोज निरौला (क्यानडा) , डा. पुरु श्रेष्ठ लगायतले आफ्नोे धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
दोस्रो विश्व स्वासथ्य सम्मेलन समापन समारोहमा विभिन्न मुलुकमा रहेका २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी, सरोेकारवाला तथा विज्ञहरुको सहभागिता थियो । ५० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी, विज्ञ तथा एनआएएनएका पधाधिकारीहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए
कुनै लाभ नपाएरै यी व्यक्ति ८ वर्षदेखि सर्प संरक्षणमा...